Ebe kasị mma na-anapụta ọnụ ala music download
Ọ bụrụ na mmadụ hụrụ n'anya na-ege ntị na-music nke ya mmasị nka, o kwesịrị ịtụle nwebiisinka mgbe ọ na-agbalị iji nweta ya mmasị songs. Ọ pụrụ isiri ụfọdụ ọrụ ime ka ya ibudata ma ọ bụ na-ege ntị free music n'ụzọ iwu kwadoro. Ọtụtụ ndị na-adịghị njikere imeli nnukwu price na ịzụ ha mmasị songs. The nhọrọ kasị mma n'ihi na ha na-eji a ọnụ ala music download saịtị. Ndị mmadụ nwere ịkpachara anya mgbe ị na-ahọrọ ụdị nke saịtị. Ha nwere iji hụ na saịtị anapụta ọnụ ala music n'ụzọ iwu kwadoro. Esonụ bụ ihe ndị na-ewu ewu na saịtị nke music hụrụ nwere ike ibudata songs cheaply.
Part2: Noise ahia
Part3: Amazon praịm music
Nke a music n'elu ikpo okwu itukwu e mepụtara a redio ime ka dịkọrọ ndụ music nke ọ bụla Genres dị ka ndị mmadụ. Na nke a inception, na WFMU redio sonyeere aka na Ọtụtụ curators. N'ihi ya, a na saịtị aghọwo ebe kacha mma maka nbudata na music. Nke a na saịtị na-eji abụọ dị iche iche na-eru nso maka ikenye tracks. Mbụ na obibia bụ ya index dị iche iche na free music akọrọ nile onye curators. Nke abụọ na obibia bụ ya ka ọrụ nke saịtị ịkọrọ ha onwe music ka Archives nke saịtị. N'agbanyeghị na ụfọdụ imebisi tracks enweghị mmepụta uru, ọ ga-eri ọrụ a dime.
Ndị mmadụ na-na-eleta saịtị site na kọmputa ga-ahụ a ala akụ nnọchianya ọzọ na songs. Site na ịpị a button ha nwere ike ibudata zip albums ma ọ bụ onye egwu n'ime ezubere iche nchekwa.
2. Noise ahia
Noise ahia bụ akụkụ nkwalite na akụkụ free music n'elu ikpo okwu. Online ọrụ nwere ike ibudata ọ bụla nke onye tracks ma ọ bụ albums. Nke a free nkwalite n'elu ikpo okwu na-agba ume na ọrụ na-ekwurịta banyere artists ha na-amasị site twitter na facebook mgbe na-enye ha otu nhọrọ ikpu onye na-ese ole na ole onyinye. Onye ọrụ interface nke saịtị a dị mfe ma dị ọcha ikwe ka ọrụ ịchọ ma ọ bụ na-agagharị albums ma ọ bụ artists effortlessly. Ha nwere ike ịchọ artists n'ime a ehiwe na-kwajuru na ekele mixtapes ma kwe nkwa ekpuchi a dịgasị iche iche nke egwú, forthcoming ihe na Genres. Nke a na saịtị na-awade nanị releases na samplers si artists tupu ha hapụ n'ebe ndị ọzọ. Ọrụ nwere ike ịhụ na njikọ na-ejikọrọ na mmadụ mgbasa ozi na peeji nke artists.
3.Amazon praịm music
Amazon bụ otu n'ime ebe kasị mma maka nbudata na music for free. Walmart nke web nwere nnukwu niile biini nke dị ọnụ ala karịa na free mp3 downloads. Na oge e dere, saịtị a nwere 46.706-awụ ọsọ n'ugwu dị maka free. Nọmba ọkọkpọhi ibu nwayọọ nwayọọ karịrị oge. Ihe kasị mma banyere ndepụta nke freebies na Amazon bụ na ọrụ nwere ike mfe agagharị music site genre. Ọbụna ọ na-agwa ha ọnụ ọgụgụ nke free tracks dị na bụla udi. Dị ka ọtụtụ ndị Amazon ngwaahịa, ọrụ ike warara ala ha na nhọrọ dabeere na ahịa reviews. Iji ibudata music na kọmputa ọrụ dị mkpa iji wụnye Amazon music ngwa. Mgbe ahụ, ha nwere ike imeghe ngwa na-agagharị maka music. Ọ bụrụ na ị nri pịa album ma ọ bụ na-abụ abụ, ị ga-otu nhọrọ download na pịa ya. Nzọụkwụ nke abụọ a na-Ịdọrọ na idobe họrọ songs n'ime download ngalaba dị na nri sidebar.
E nwere mobile ngwa maka android na iOS ngwaọrụ site na nke ọrụ ike ibudata ha mmasị music n'ebe ọ bụla. Otu n'ime drawbacks nke saịtị a ọ bụ ka ọrụ ibudata na songs na ngwaọrụ eji ihe na ngwa na ọ na-apụghị na-akọrọ ndị ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọrụ ike na-ege ntị songs na dị na ngwaọrụ ha na-eji ibudata. Ha nwere ike na-ege ntị ndị listi ọkpụkpọ mgbe ha na-anọghị n'ịntanetị.
MP3.com bụ ndị kasị ochie na saịtị na ndepụta a. E guzobere ya n'afọ 1997. Ọ bụ ezie na ọbá akwụkwọ nke saịtị a abụghị nnukwu dị ọrụ na-atụ anya, ka ọ na-ama a nnukwu collection nke music. Nke a na saịtị awade dị iche iche genre nke music dị ka pop Punk, Jazz, metal na hip iwuli elu. Saịtị obụrede mbụre a dịgasị iche iche nke MP3s na àjà a ukwuu ọnụ ọgụgụ nke songs a onye ọrụ nwere ike achọpụta ọ bụla ọzọ. Otu n'ime drawbacks nke saịtị a ọ bụ na adịghị ka ọrụ ibudata dum album.
Jamendo bụ otu n'etiti ndị kasị ibu repositories nke ọnụ ala music na weebụ. Nke a na saịtị dere fọrọ nke nta 400,000 tracks si 40,000 artists. Ọ bụ ezie na ọrụ ike ịhụ niile ha mmasị artists na saịtị a, ha nwere ike ịhụ ndị streamlined ọrụ interface nke saịtị-eme ka ọ ukwuu n'ihi na ha na-agagharị na na ịhụ ọhụrụ nkà egwú. Ọrụ nwere ike peruse tracks site kasị ebudatara, ewu ewu, ọhụrụ ntọhapụ ma ọ bụ ọtụtụ egwuri kama eme nchọgharị na music site genre. Ewu ewu na nke music dabeere na Fim nke onye ọrụ. N'agbanyeghị a nnukwu collection egwu dị na saịtị, ọrụ ike zere okodu oge ha na nchọgharị site na-eme searches site n'elu echiche. Eso ndị a ibudata music na saịtị a.
Pịa debanyere njikọ dị na n'elu nri akuku nke na peeji nke. Mepụta akaụntụ site n'ido a aha njirimara na paswọọdụ ma ọ bụ jiri gị facebook akaụntụ edebanye. Na isi peeji ị ga-achọta menu nhọrọ na ike iduzi gị ka mma-tracks nke a izu. Ozugbo ị họrọla track ị nwere ike ma ịgbakwunye music ka playlist ma ọ bụ na ibudata ya.
Ebe Download Free Music, na Sites Via égwu Iji Software
> Resource> Music> Best Ebe anapụta Cheap Music Download